Fitaovana alika - Mundo Perros | Alika Manerantany
Ny tontolon'ny alika dia nivoatra be ary ankehitriny isika dia ny zavatra isan-karazany hanamorana ny andro andavanandro miaraka amin'izy ireo. Tsy zava-poana fa sakaizan'ny olona indrindra izy, ka mendrika ny fikarakarana rehetra azontsika omena azy. Azontsika atao ny manasokajy ny kojakoja amin'ny alàlan'ny fampiasana omentsika azy ireo, hanamorana ny asa asitrika ao anaty tontolo manolotra zavatra maro kokoa.
ny Accessories ampiasain'ny alika dia saika tontolo iray misaraka, tsy noho ny utility fa ireo dia notaterina, fa avy amin'i koa aesthetics. En Alika Manerantany ho hitantsika ny vaovao tsara indrindra momba ny farany fironana amin'ny raharaha canine, avy amin'ny voavola na biby ho an'ny alika kely sy alika olon-dehibe, raha vozon'akanjo na a andilany, ny fampiasana ny muzzles, fitaratra intraocular ho an'ny katarakta, elo, repellers na paosy nify, na kilalao fanaovana firaisana ara-nofo ho an'ny alika aza.
Ahoana no tsy ahafahana miresaka momba ny rehetra kojakoja alika misy, hiresaka momba ny sasany araka ny sokajy izahay. Manomboka amin'ireo kojakoja ampiasainay isan'andro ka hatrany amin'ireo izay natao ho an'ny fahadiovanao na ireo izay mahagaga sy manavao aza.
Fitaovana ho an'ny isan'andro
Ny andavan'andro miaraka amin'ny alika dia mitaky andian-tsarimihetsika izay tena ilaina. Alohan'ny hivoahan'ny alika dia efa mila vonona vitsivitsy ao an-trano isika. Azontsika atao koa ny mandinika ireo kojakoja ireo mba ho mazava momba izay ilaina isan'andro miaraka amin'ny alika. Hanombohana, iray amin'ireo zavatra fototra dia asio toerana hatory ilay alika, izay ilantsika a alika fandriana. Amin'izao fotoana izao dia misy maodely tsy hita isa. Ny fandriana misy lamba, leatherette mba hahamora ny fanadiovana azy ireo, miaraka amina akorandriaka vita amin'ny plastika na wicker ary indrindra ireo fandriana vita amin'ny sombin-javatra ary mahazo aina ho an'ny alika rehetra. Azontsika atao ny mividy fandriana boribory na mahitsizoro amin'ny endrika am-boalohany. Fa ambonin'izay rehetra tsy maintsy eritreretintsika ny haben'ny alika, ka ny fandriana mahazo aina ampy ho azy.
Fitaovana iray hafa hampiasain'izy ireo isan'andro ny mpampihinana alika sy mpanondraka. Misy ny plastika fa ny vy kosa dia atoro anao foana, izay tsy isalasalana fa haharitra ela kokoa. Ny sasany amin'ireo izay toa mety indrindra amin'ny alika rehetra dia ireo izay manana ampahany plastika tsy misosasosy eo am-potony ihany koa, manakana ny alika tsy hisintona ny mpamatsy mandritra ny sakafo sy fisotroana. Azo atao ihany koa ny mahita zavatra be pitsiny kokoa, toy ny mpanome sakafo izay manome sakafo arak'izay ilaina, fa ireo dia tsy ampiasaina raha tsy avelantsika irery irery ilay alika.
Etsy ankilany, ny dia dia ilaina amin'ny alika, ka tsy maintsy hanao izany isika mividy ny fehin-kibony sy ny vozon'akanjony na ny fiadiany hitondra azy hitsangatsangana. Amin'ity fotoana ity dia hisokatra eo alohanay ny tontolon'ny fahafaha-manao zavatra rehetra. Ny zava-dehibe dia ny mividy a rojo ho an'ny alika fa mifanaraka amin'ny habeny ka tsy afa-mandositra izy, milamina sy matanjaka raha sanatria misintona ilay alika ary lehibe, ka tsy vaky izy. Tsara kokoa ny misoroka ny tadiny tsy dia misy kalitao mety hampatahotra antsika bebe kokoa. Nanjary nalaza be ny harnesses saingy tsy atoro azy ireo raha misintona be ilay alika, satria tsy miadana loatra izy io rehefa misintona amin'ny vatana iray manontolo fa tsy amin'ny tendany fotsiny, toy ny amin'ny fehy. Miaraka amin'ilay tady, dia mila ny kitapo mivoaka miaraka amin'ny mpihazona kitapo koa isika, izay mora hita ankehitriny.
ny ny kilalao koa dia ampahany amin'ny fiainana isan'andro ny alika, mba hahafahanay mividy anao. Misy karazany maro, avy kilalao malefaka ho an'ny alika kely amin'ny kilalao misy tadiny na baolina mafy. Ny tena tadiavina dia ny kilalao manafina loka ao anatiny ary ahafahan'izy ireo miala voly lava.
Rehefa mandehandeha miaraka amin'ny biby isika dia mila manampy kojakoja tena ilaina tokoa. Ny iray amin'izy ireo dia ilay mpitatitra. Efa nilaza taminay ny momba ny karazana mpitatitra alika, noho izany ny olona tsirairay dia tsy maintsy misafidy izay mety indrindra amin'ny biby fiompy, na ny kitapo, ny kitapo na ny tranom-by. Amin'ny toerana maro dia takiana tsy maintsy atao aza ny mitondra azy ireo, noho izany dia mila iray isika raha te-hitety an'izao tontolo izao miaraka amin'ilay alika.
La manarona seza fiara Famoronana iray hafa lehibe tokony hividianan'izay rehetra manana biby. Saron-seza izay manampy amin'ny fisorohana ny fanadiovana ny fiara mandritra ny ora maro aorian'ny fakana ny alika, indrindra raha mandatsaka volo be dia be. Mahafinaritra, mora apetraka ary miaro ny lamba fisaka, na dia mandoa aza ny alika. Famoronana ihany.
Akanjo ho an'ny alika
Ny tontolon'ny fitafiana ho an'ny alika izy io koa dia mahavita lahatsoratra iray tena feno. Hitanay izao akanjo alika karazana miasa, toy ny palitao miaro azy ireo amin'ny orana na akanjo mafana ho an'ny alika kely volo. Fa misy ihany koa ny fironana hampiasa akanjo alika satria lamaody izany, indrindra amin'ny karazany kely izay manome endrika tsara endrika. Matetika aza ny mahita kiraro alika, na dia eo aza ny alika mandeha amin'ny lanezy dia ilaina izy ireo mba hiarovana ny lambany.
Tena zava-dehibe ny fahadiovan'ny alika, koa tsy maintsy dinihintsika koa ireo kojakoja izay eny an-tsena. Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia tohotra alika. Miankina amin'ny volon'ny volonao, tsy maintsy mividy iray na hafa isika. Misy borosy manokana ho an'ny volom-bolo roa sosona, ho an'ny volo lava, olioly na marokoroko. Misy ihany koa ny kojakoja izay manamora antsika ity asa ity raha fohy sy ara-dalàna ny volon'alika, toy ny mittens hanamboarana azy ireo.
Raha iray amin'ireo isika Tianay ny manao taovolo an-trano mba hitehirizana kely, afaka mividy a isika Tsy misy vokatra.. Misy ireo tena feno, miaraka amin'ny masinina, hety ary loha isan-karazany. Amin'izany isika dia afaka ny ho lasa stylists ny alika manokana.
Anisan'ireo kojakoja momba ny fahadiovana no ahitantsika zavatra maro hafa, toy ny a kitapo fanadiovana nify. Ireo karazan-javatra ireo dia mety hanamora ny fiainana antsika amin'ny biby fiompintsika ary koa manampy antsika hanao fitsidihana matetika ny mpitsabo biby satria hitandrina tsara ny nifiny isika.
Fitaovana alika mahatalanjona
Ireo kojakoja izay misy ankehitriny dia afaka manarona filàna maro be. Raha mijery magazay an-tserasera isika dia hahita zavatra tena mahaliana. Afaka mividy, ohatra, ianao un fampiasa haingam-pandeha ny alikanao mba hanomboka fiofanana amin'ity fanatanjahantena ity, na hiala voly fotsiny.
ny Nat Cherry hace Andro 6 .
Mihamitombo hatrany ny fahatsiarovan-tena amin’ny resaka tontolo iainana, ary angamba izay no mahatonga izany…
ny Nat Cherry hace Herinandro 2 .
Ny tsihy olfactory ho an'ny alika dia karazana kilalao mahasoa indrindra amin'ny alika izay ...
ny Nat Cherry hace Herinandro 3 .
Ny tsihy alika mamelombelona dia hevitra tena tsara mba hampangatsiaka ny alikanao amin'ny ora ...
ny Nat Cherry hace 1 volana .
Tena manampy tokoa ny sezan'alika rudas raha mila fanampiana hifindra ny alikanao, na ho ...
ny Nat Cherry hace 2 volana .
Ny borosy alika dia fototra tsy maintsy ananantsika ao an-trano mba hitazonana ny volony ho madio, mamirapiratra ary, ...
Diaper alika dia vokatra manokana hitsaboana zavatra toy ny tsy firaharahiana na ny fahanterana, fa koa ...
Ny kapaoty alika dia akanjo tena ilaina amin'ny volana mangatsiaka, indrindra raha avy ny orana na ny lanezy, na dia ...
ny Nat Cherry hace 3 volana .
Ny satroka alika dia fitaovana tena ilaina amin'ny volana mafana indrindra amin'ny taona na amin'ny ...
Ny cones alika dia fitaovana tena ilaina sy ilaina rehefa avy nodidiana ny alikanao, ...
ny Susana godoy hace 3 volana .
Ny sakana ho an'ny alika dia iray amin'ireo singa fiarovana izay tena ilaintsika. Tsy ho azy irery ihany fa ...
Ny chip ho an'ny alika dia vokatra tena ilaina mba hahafantarana ny biby fiompinao sy hanafainganana sy hanamorana ny dingana ...
Inona no atao hoe pipette ary inona no ilana azy?